UNSOM: Waxay soo bandhigeysaa shaqo ka bannaan: Kaaliyaha Sarkaalka Xuquuqda Aadanaha - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
In uu HRPG ka hirgeliyo heer qeyb/goob, uu la socdo, dabaggalo, isla markana uu gudbiyo warbixin ku aaddan xad-gudubyada iyo tacaddiga xuquuqda aadanaha;
In uu fuliyo ol’ole isla markana uu tababarrada iyo karti-dhiska dhinaca xuquuqda aadana u ballaariyo hay’adaha amniga iyo kuwa sharciga si loo xoojiyo u hoggaansanaanta si waafaqsan shuruudaha ku xusan HRDPP, gaar ahaan sare u qaadidda awoodda ay maamul goboleedyada u leeyihiin in ay ku horumariyaan la xisaabtankooda iyo ilaalintooda, ayna baaritaanno madax bannaan ka sameeyaan dhacdooyinka marka ay awoodaan;
In uu ka qaybqaato diyaarinta qiimeynta halista HRDPP iyo ogaanshaha tallaabooyinka lagu yareynayo marka loo eego codsiyada ku aaddan taageerro oo ay soo gudbiyaan ciidamada ammaanka ku sugan goobta;
In uu sare u qaado awoodda loo leeyahay in la bixiyo diginin hore iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo in laga hortago waxna laga qabto xad-gudubyada ay geystaan ciidamada ammaanka;
In uu fuliyo waajibaadyada kale ee loo xil-saaro.
Dadka u qalma shaqadan waxaa ay ku soo gudbin karaan codsiyadooda oo ay qayb ka tahay foomka Taariikhda Shakhsiyeed ee Qaramada Midoobay (P.11) cinwaanka hoose markii la joogo ama ka hor taariikhda kama dambeysta ah. P11 waxaa aad ka heli kartaa https://unsos.unmissions.org/jobs. Codsiyada la soo gudbiyo kaddib wakhtiga kama dambeysta ah ee ah 02 Agosto 2018-ka lama aqbali doono. Warqadaha taarikh nololeedka dadka (CVs) lama aqbali doono.
Previous articleWafdigii dowladda Qatar ee maalgashiga Dekadaha Somalia oo la kulmay Ra’iisal Wasaare Kheyre
Next articleWasiirka Isgaarsiinta oo difaacay dhismaha Hay’adda Isgaarsiinta Qaran & Khaladkii ka dhacay ansixinta Guddiga